वैश्वीक जलवायु परिवर्तनका संभावित प्रभाव - krishipost.com
– डा. केदार कार्की
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव मानव स्वास्थ्यमा पर्नेछ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको रिपोर्ट अनुसार जलवायुमा तापनकाकारण श्वास तथा हृदय सम्बन्धी रोगहरुमा बृद्धि हुनेछ । दुनियाका विकासशील देशहरुमा झाडापखाला, पेचीस हैजा, क्षयरोग, पित ज्वरो तथा म्यादी ज्वरो जस्ता संक्रामक रोगहरुको बारंबारतामा वृद्धि हुने छ । किनकी रोग फैलाउनेखाले रोगबाहहरुको गुणन एवं विस्तारमा तापमान एवं बर्षाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । अतः दक्षिण अमेरिका, अफ्रिका तथा दक्षिण पूर्व एसियामा लामखुट्टेहरुबाट फैङे रोगहरु जस्तै मलेरिया, डेंगु, पहेंलो ज्वरो तथा जापानी ज्वरोको प्रकोपमा बढोत्तरीका कराण यी रोगहरुका कारण हुने मृत्युदरमा बृद्धि हुनेछ । यस बाहेक हात्तीपाइले तथा चिकन गुनियाको पनि प्रकोप बढ्नेछ । लामखुट्टेजनित रोगहरुको विस्तार उत्तरी अमेरिका तथा युरोपका चिसो देशहरुमा पनि हुनेछ । हनम्रो आफ्नै परिवेशमा विगतमा तराईमा मात्र देखिने जापानी ज्वरो, डेंगु, मलेरिया हिजोआज पहाडी, मध्यपहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा पनि नियमित देखिन थाल्नुले पुष्टि गर्दछ । मानव स्वास्थ्यमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावले गर्दा एउटा ठूलो जनसंख्या विस्थापित हुनेछ जसलाई पर्यावरणीय शरणार्थी भनिनेछ । जलवायु परिवर्तनको फलस्वरुप रोगाणुहरुमा बढोत्तरीका साथसाथै यिनको नयाँ प्रजातिहरु विकसित हुनेछन् जसको परिणामस्वरुप बालिनालीहरुको उत्पादकतामा विपरित प्रभाव पर्नेछ । बालिनालीहरुको किरा फट्याङ्ग्रा नाशीजीवहरु तथा रोगाणुहरुबाट सुरक्षाको लागि नाशी जीवननाशकहरुको उपयोग मात्रामा बढोत्ती हुनेछ जसले गर्दा वातावणा प्रदूषित हुनेछ साथै मानवीय स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्नेछ । वैश्वीक जलवायु परिवर्तनको परिणामस्वरुप दुनियाको मनसुनी क्षेत्रहरुमा वर्षमा बृद्धि हुनेछ जसले गर्दा बाढी, भुस्खलन तथ भूमी अपरदान जस्ता समस्या पैदा हुनेछ । पानीको गुणस्तरमा गिरावट आउने छ । वैश्वीक जलवलयु परिवर्तनले जलश्रोतहरुको वितरणमा पनि प्रभाव पर्नेछ । उच्च अक्षांश भएका देशहरुमा तथा दक्षिण पूर्व एसियाका जलश्रोतहरुमा पानीको अधिकता हुनेछ जवकी मध्य एसियामा पानीको कमी हुनेछ । न्यून अक्षांश भएका देशहरुमा पानीको कमी हुनेछ । जलवायु परिवर्तनका कारण ध्रुवीय हिँऊ पग्लिनाले विश्वको औसत समुद्री जलस्तर एक्काइसौं शताब्दीको अन्त्यसम्म ९ देखि ८८ सेमीसम्म बढ्ने सम्भावना छ जसबाट छ जसबाट दुनियाको आधिभन्दा बढी आवादी जुन समुन्द्र बाट ६० कि.मी. को दूरीमा अवस्थित छन् तिनमाथी विपरित प्रभाव पर्नेछ । बंगलादेशको गंगा–ब्रम्हपुत्र, डेल्टा, मिश्रको नील डेल्टा तथा मार्शलद्विप र मालदिव सहित अनेकौं साना द्विपको अस्तित्व वर्ष २१०० सम्म समाप्त हुनेछ ।
वैश्वीक जलवायु परिवर्तनको प्रभाव समुद्रमा पाइने जैविक विविधता सम्पन्न प्रवल भित्तिहरु ९ऋयचब िचभभाक० माथि पर्नेछ जसलाई महासागरहरुको उष्ण कटिबन्धिय वर्षा पनि भनिन्छ । समुन्द्री पानीमा उष्णताको परिणमस्वरुप ब्निबभ हरुमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नेछ जसले कि प्रवाल भित्रीहरुलाई भोजन तथा वर्ण उपलब्ध गराउँछन् । उष्ण महासागर विरंजन ९द्यभिबअजष्लन० प्रक्रिायको कारक हुनेछ जो यी उच्च उत्पादकता भएका पारीतन्त्रहरु ९भ्अयकथकतझक० लाई नष्ट गर्नेछ । प्रशान्त महासागरमा वर्ष १९९७ मा अलनिनोको कारण बहेको ताजको तीब्रता प्रवालहरुको मृत्युको सबैभन्दा गम्भीर कारण बनेको थियो । एक अनुमानका अनुसार पृथ्वीको लगभग १० प्रतिशत प्रवाल भित्रीहरुको मृत्यु भइसकेको छ । ३० प्रतिशत गम्भीर रुपले प्रभावित भएका छन् तथा ३० प्रतिशतको क्षरण भएको छ । ग्लोवल कोरल रीप मोनिटरिङ्ग नेटवर्क अष्ट्रेलियाको अनुमान अनुसार वर्ष २०५० सम्ममा सबै प्रवल भित्रीहरुको मृत्यु हुनेछ ।
वातावरणमा ज्यादा उर्जाको संलग्नताले वैश्वीक वायु पद्धति ९न्यिदब िधष्लम उबततभचल० मा पनि परिवर्तन हुनेछ । वायु पद्धतिमा परिवर्तनको परिणामस्वरुप वर्षा असमान हुनेछ । भविष्यमा मरुभूमिहरुमा बढी वर्षा हुनेछ जवकी यसको विपरित पारंपारिक कृषि हुने क्षेत्रहरुमा कम वर्षा हुनेछ । यस किसिमको परिवर्तनले ठूलोममात्रामा मानवीय बसाइसराईलाई प्रोत्साहित गर्नेछ । जसले मानव समाजको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक ढाँचालाई प्रभावित गर्नेछ ।
वैश्वीक जलवायु परिवर्तनको फलस्वरुप बाढी खडेरी तथा आँधी, तुफान, टोर्नाडो जस्ता प्राकृतिक आपदहरुको बरंवारतामा बृद्धिको कारण अन्न उत्पादनमा गिरावट आउने छ । स्थानीय खद्यान्न उत्पादनमा कमी, भोकमरी र कुपोषणको कारण बन्नेछ जसबाट स्वास्थ्यमा दीर्धकालिन प्रभाव पर्नेछ । खाद्यान्न र पानीको कमीबाट प्रभावित क्षेत्रहरुमा समुदायहरुबीच द्वन्द्व हुनेछ । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव जैविक विविधतामा पर्नेछ । कुनै पनि प्रजातिको अनुकुलनका लागि समयको आवश्यकता पर्दछ । वातावरणमा आकस्मिक परिवर्तनले अनुकुलनको अभावमा त्यसको मृत्यु हुनेछ । जलवायु परिवर्तनको सर्वाधिक प्रभाव समुन्द्रको तटिय क्षेत्रहरुमा पाइने दलदली क्षेत्रका वनस्पतीहरुमा पर्नेछ जसले तटलाई स्थिरता प्रदान गर्नका साथसाथै समुन्द्री जीवहरुको प्रजननको लागि आदर्श स्थल प्रदान गर्छ । दलदली वन ९ःबलनचयखभ ायचभकत० जसलाई ज्वारीय वन पनि भनिन्छ जसले तटीय क्षेत्रहरुलाई समुन्द्री तुफानहरुबाट रक्षा गर्ने काम पनि गर्दछ । जैविक विविधताको कारणले गर्दा पारिस्थितिक असन्तुलनको जोखिम बढ्नेछ ।